Vaovao - Moa ve ny sarontava miaro ny olona mitafy azy ireo na ny olona manodidina azy?
"Heveriko fa ampy ny porofo milaza fa ny tombontsoa tsara indrindra dia ny olona manana COVID-19 hiaro azy ireo amin'ny fanomezana COVID-19 ho an'ny olon-kafa, saingy mbola hahazo tombony ihany ianao amin'ny fanaovana sarontava raha tsy manao" tsy manana COVID-19, "hoy i Chin-Hong.
Ny sarontava dia mety mandaitra kokoa amin'ny maha "fanaraha-maso loharano" satria afaka manakana ireo vongan-drano voaroaka lehibe kokoa tsy ho etona ho any amin'ireo vongan-drano kely kokoa izay afaka mandeha lavitra kokoa.
Antony iray tokony tadidio ihany koa, hoy Rutherford, ny mbola mety hahatratraranao ilay virus amin'ny alàlan'ny fonosana eo imasonao, mety tsy hofoanana ny masking.
Misy dikany ve ny karazana sarontava?
Nampitaha fitaovana isan-karazany amin'ny saron-tava ny fandinihana, fa ho an'ny besinimaro, ny fampiononana no zava-dehibe indrindra. Ny saron-tava tsara indrindra dia izay azonao hotafiana tsara sy tsy tapaka, hoy i Chin-Hong. Ny respirator N95 dia tsy ilaina afa-tsy amin'ny toe-javatra ara-pahasalamana toy ny fidirana anaty. Ny saron-tava fandidiana amin'ny ankapobeny dia miaro kokoa noho ny saron-tava, ary misy olona mahita fa maivana sy mahazo aina kokoa ny manao azy.
Ny fehiny dia ny saron-tava izay manarona ny orona sy ny vava dia hahasoa.
"Ny fiheverana dia ny fihenan'ny risika fa tsy fisorohana tanteraka," hoy i Chin-Hong. “Tsy atsipinao ny tananao raha mieritreritra ianao fa tsy mahomby 100 isan-jato ny sarontava. Adalana izany. Tsy misy mihinana fanafody kolesterola satria izy ireo hisoroka ny aretim-po 100 isan-jaton'ny fotoana, saingy mampihena ny risikao izany. ”
Na izany aza, i Rutherford sy i Chin-Hong dia samy nampitandrina ny amin'ny saron-tava N95 misy valves (matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana mba hisorohana ny fifohana vovoka) satria tsy miaro ny manodidina anao izy ireo. Mihidy ireo valva tokana ireo rehefa miaina ny fividianana, fa misokatra kosa izy rehefa miaina ny fofonaina, mamela ny rivotra sy ny vongan-drano tsy voasivana hitsoaka. Nilaza i Chin-Hong fa na iza na iza misaron-tava dia mila misaron-doha na saron-doha. "Raha tsy izany, manaova sarontava tsy misy valvaly fotsiny," hoy izy.
Nofaritan'i San Francisco fa ny sarontava misy valves dia tsy mifanaraka amin'ny baiko mandrakotra ny tanàna.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava Ffp3, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava azo ampiasaina 3ply,